इंग्लिस प्रिमियर लिगकाे उपाधि सिटीकाे कव्जामा spacekhabar
Saturday, August 24, 2019 | शनिबार, भदौ ७, २०७६
इंग्लिस प्रिमियर लिगकाे उपाधि सिटीकाे कव्जामा
इ‌ंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि म्यानचेस्टर सिटीले जितेको छ। म्यानचेस्टर सिटीले आइतबार राति खेलिएको आफ्नो अन्तिम खेलमा तुलनात्मक रुपमा कमजोर प्रतिद्वन्द्वी ब्राइटनलाई उसैको मैदानमा ४-१ गोलले हरायो।
उक्त जितसँगै म्यानचेस्टर सिटी प्रिमियर लिगको उपाधि जोगाउन सफल भयो। म्यानचेस्टर सिटी सन् २००९ पछि लगातार दुईपटक उपाधि जित्ने पहिलो टोली हो। उपाधि जोगाउन म्यानचेस्टर सिटीले अन्तिम खेल जित्नै पर्ने दबाब थियो।
उपाधिको होडमा रहेको लिभरपुलले पनि अन्तिम खेलमा जित हात पार्‍यो। तर, म्यानचेस्टर सिटीको जितसँगै लिभरपुलको उपाधि सपना चकनाचुर बन्न पुग्यो। लिभरपुलले आफ्नो अन्तिम खेलमा घरेलु मैदानको फाइदा उठाउँदै उल्भरह्याम्पटनलाई २-० गोलले हरायो। खेल सुरु भएको २७औं मिनेटमा पहिलो गोल खाएको म्यानचेस्टर सिटीले त्यसपछि खेलमा उत्कृष्ट पुनरागमन गरेको थियो। ब्राइटनका लागि ग्लेन मुरेले पहिलो गोल गरेका थिए।
म्यानचेस्टर सिटीका लागि २८औं मिनेटमा सर्जियो एग्वेरोले जवाफी गोल गरे। ३८औं मिनेटमा आयमेरिक लापोर्टले म्यानचेस्टर सिटीको अग्रता दोब्बर बनाए। ६३औं मिनेटमा रियाद माहरेजले तेस्रो गोल गरे भने ७२औं मिनेटमा ईकी गुन्डोगनले चौथो गोल थपेका थिए। अर्को खेलमा लिभरपुलका लागि भने दुवै गोल साडियो मानेले गरेका थिए।
अन्तिम चरणको खेलको समाप्तिपछि म्यानचेस्टर सिटी (९८ अंक) पहिलो, लिभरपुल (९७ अंक) दोस्रो, चेल्सी (७२ अंक) तेस्रो र टोट्टनहाम (७१ अंक) चौथो हुँदै आगामी सिजनको च्याम्पियन्स लिगमा छनोट भए। पाँचौं भएको आर्सनल (७० अंक) र छैटौं भएको म्यानचेस्टर युनाइटेड (६६ अंक) भने आगामी सिजनको युरोपा लिगका लागि छनोट भए। कार्डिफ सिटी, फुलहाम र हडर्सफिल्ड टाउन रेलिगेसनमा परे ।
अन्तिम चरणको खेलमा आर्सनलले बर्नलीलाई उसैको मैदानमा ३-१ ले हरायो भने चेल्सीलाई लेस्टर सिटीले गोलरहित बराबरीमा रोक्यो। म्यानचेस्टर युनाइटेड भने कार्डिफ सिटीसँग उसैको मैदानमा २-० गोलले पराजित भयो। टोट्टनहाम भने घरेलु मैदानमा एभर्टनसँग २—२ गोलको बराबरीमा रोकियो।
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख ३०, २०७६, ०६:५२:००
भारतका पूर्व बित्तमन्त्री जेट्लीको निधन
राहुल गान्धीलाई जम्मू काश्मीर भ्रमणमा प्रतिबन्ध!
४ महिनापछि श्रीलङ्कामा लगाइएको संकटकाल हट्यो
गलत सामाग्री अपलाेड गरिएका २१० युट्युव च्यानल बन्द!
भारतीय कंग्रेस नेता तथा पूर्व मन्त्री चिदम्बरम भ्रष्टाचारकाे अभियाेगमा पक्राउ
तराई-मधेस द्रुतमार्गको डीपीआर स्वीकृत
विश्व जुनियर पौडी प्रतियोगिता: नेपालका दुई खेलाडीद्धारा राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम
श्रील‌ंकामा हुने यू–१९ एसिया कप खेल्ने नेपाली टिमको घोषणा
एभीसी सेन्ट्रल जाेन भलिबल : नेपाल र माल्दिभ्स भिड्दै
यू-१९ एसिया कप नेपालकाे पहिलाे प्रतिद्वन्द्वी श्रीलंका
ला लिगामा एट्लेटिको मड्रिड विजयी
पौडी टोली हंगेरी प्रस्थान
प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बढी पाउने प्रदेशमा ३ अगाडी, प्रदेश २ सबैभन्दा कम
रेल सञ्चालन गर्न रेलवे कम्पनी ब्युँताइँदै
शिक्षक हुन दुईवटा परीक्षा!
सगरमाथा उचाई मापनको ९० प्रतिशत काम पूरा
सेनामा भुँडेलाई अवसर कम
कश्मीरमा पाकिस्तानी सेनाको गोली प्रहारबाट एक गोर्खा सैनिकको मृत्यु
जसको गुत्थी अझै पत्ता लागेन
पत्रकार रवि लामिछानेसहित तीन जनालाई आज फेरि अदालत लगिँदै
प्रजातन्त्र मास्न खोज्ने कम्युनिस्टलाई सिध्याइदिन्छौं : देउवा
वर्तमान सरकार चौतर्फी रुपमा असफलः निधि
बन्दै विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसन
‘डिजिटल नेपाल’मा अहिलेसम्मकै ठूलो लगानी